Samsung ချစ်သူတွေစောင့်မျှော်နေတဲ့ Samsung Galaxy Note9-
မကြာသေးခင်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Samsung Note Series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy Note9ရဲ့ Specification လေးတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အရမ်းမိုက်တဲ့ အချက်လေးတစ်ချက်ကတော့ S Pen လေးပဲဖြစ်ပါတယ်…S Pen လေးနဲ့ Control လုပ်ပြီး Camera ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အခြားသော Function တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်အုံးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကဲကဲဒီတော့ Samsung Galaxy Note9လေးရဲ့ Specification လေးကိုလည်းဖော်ပြပေးပါမယ်…
Samsung Galaxy Note9ရဲ့ Chipset ကို Exynos 9810 Octa – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 – USA/LATAM, China ကိုသုံးထားပြီး CPU ကိုတော့ Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA/LATAM, China အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ GPU ကလည်း Adreno 630 – USA/LATAM, China ကိုသုံးပေးထားတာဆိုတော့ Game ဆော့တတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်း သင့်တော်ပါတယ်။
Display ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors. Resolution 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~516 ppi density) နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီး Screen Size ကတော့ 6.4 inches, 103.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) ဆိုတော့ Screen မျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ် ကြိုက်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ။
Samsung Galaxy Note9ရဲ့ Camera ကလည်း တော်တော်လေးကိုမိုက်လာပါတယ်။ Main Camera က Dual Camera ကို 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4″, 1µm, AF, OIS, 2x optical zoom အသုံးပြုထားပြီး Feature တွေအနေနဲ့က LED flash, auto-HDR, panorama ပါဝင်တယ်။ Selfie Camera မှာဆိုရင်လည်း Single Camera ကို 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6″, 1.22µm, AF အသုံးပြုထားပြီး Feature တွေအနေနဲ့ကတော့ Dual video call, Auto-HDR ပါဝင်ပါတယ်။ Video ရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့ Main Camera မှာ 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. နဲ့ဆိုတော့ တော်တော်လန်းလန်းကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ Selfie Camera မှာဆိုရင်လည်း 1440p@30fps နဲ့ဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေး ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
Samsung Galaxy Note9ရဲ့ Internal Memory ကတော့ 128 GBနဲ့ 512 GB နှစ်မျိုးရှိပြီး External Memory အနေနဲ့ 1TB တောင်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ အကြိုက်သုံးနိုင်ပြီပေါ့။ RAM ကလည်း 8 GB ဆိုတော့ သုံးရတော့ တော်တော်လေးကောင်းမှာပါ။
Samsung Galaxy Note9ရဲ့ Operating System ကိုတော့ Android 8.1(Oreo) ကိုအသုံးပြုထားပါ တယ်။
Sensor တွေကတော့ Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 တွေပါဝင်ပါတယ်။ Fingerprint Sensor လေးတော့နေရာပြောင်းသွားပါတယ်၊ အရင်က Camera တွေနဲ့ဘေးတိုက်အနေအထားရှိနေခဲ့ပြီး ဒီ Samsung Galaxy Note9မှာတော့ Fingerprint Sensor လေးက Camera တွေရဲ့အောက်ဖက်ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။
Battery အနေနဲ့လည်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကတော့ အရင်တုန်းက Samsung Galaxy Note 8 မှာ Non-removable Li-Ion 3300 mAh သာသုံးခဲ့ပေမဲ့ အခု Samsung Galaxy Note9မှာတော့ Non-removable Li-Ion 4000 mAh ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီဆိုတော့ Battery ပိုင်းကလည်း ပိုမိုက်လာပါပြီ။
Samsung Galaxy Note9ရဲ့ Color မှာဆိုရင် အရမ်းမိုက်တဲ့ Metallic copper, Lavender purple, Ocean blue, Midnight black တွေဖြစ်တဲ့ အတွက်မိတ်ဆွေတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရောင်ကို စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
စျေးနှုန်းအနေနဲ့ တော့ (၁၀) သိန်းကျော်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်။ အကောင်းစားနောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းတွေ ကိုမှကိုင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေအတွက်ကတော့ ဒီ Samsung Galaxy Note9က အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
Posted by Min Thuta/ Wednesday September 12th, 2018/ Blog/0Comment